ပန်းလှိုင်နေထိုင်မှုဘဝ - မျှဝေ၊ ယှဥ်တွဲနေထိုင်၊ ပေးကမ်းခြင်းအချိန်ကာလ ဒီဇင်ဘာလ သတင်းစာစောင်
ချစ်ခင်လေးစားရပါသောပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်း နေထိုင်သူများနှင့် မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါ။
ဒီဇင်ဘာလ ပန်းလှိုင်သတင်းစာစောင်လေးမှ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
ယခုနှစ်အတွင်းမှာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာတွေက အများကြီးပါပဲ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကြီးက stay-at-home, work-from-home, Lockdown, semi-lockdown စတာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်လို့ ဘယ်သူကမှ မျှော်လင့်မထားခဲ့ကြပါဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ coronavirus ရောဂါကို ကုသနိုင်မယ့် ဆေးသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် အနာဂတ်နေ့ရက်တွေဟာ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့အတူ တောက်ပလျက် ရှိနေပါတယ်။ မကြာမြင့်လှတဲ့ အနာဂတ် အချိန်တွေမှာ ခရီးတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ထွက်ကြ၊ ချစ်ခင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ဆုံကြရင်း အချင်းချင်းပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက် နိုင်မယ့်နေ့ရက်လေးတွေ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
၂၀၂၀ ခုနှစ် ကုန်ဆုံးတဲ့ အချိန်ကို အကောင်းမြင်မှုတွေနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အဆုံးသတ် လိုက်ကြရအောင်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဟာ ထူးခြားပြောင်းလဲတဲ့နှစ်တစ်နှစ် အဖြစ် ရောက်ရှိလာမှာအသေအချာပါပဲ။
နှစ်ဟောင်းတစ်ခု ကုန်ဆုံးတဲ့အချိန်ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက် ပန်းလှိုင်အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့သူတွေအပြင် Country Club အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ပါ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အစီအစဥ်လေးတွေ လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။
အေးချမ်းလုံခြုံတဲ့ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှာနေထိုင်နေကြသူ အားလုံးအတွက် အလေးအနက်စဥ်းစားပြီး ဖန်တီးပေးထားတဲ့ အစီအစဥ်လေးတွေဖြစ်တာကြောင့် မိသားစုလိုက်ပဲဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးချင်းပဲဖြစ်စေ ပါဝင်ကြဖို့ လှမ်းလာခဲ့ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဘေးကင်းပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ခရစ်စမတ်ကာလလေးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုလုပ်ရသေးသော အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများအနေနှင့် Google Form မှတဆင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အိမ်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပန်းမန်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ နှင့် ၇ ရက်နေ့ အသီးသီးတို့တွင် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
TIGERS, COBRAS နှင့် PYTHONS အဖွဲ့ဝင်လေးများခေါ်ယူခြင်း
ဂေါက်ရိုက်အားကစားဝါသနာရှင်များအားလုံးကို ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါးလာရောက်ကစားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း၊ စုံတွဲ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပိတ်ရက်နှင့်ကြားရက်များဆိုပြီး ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီး ရှိလို့နေပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အသုံးစရိတ်၊ နေထိုင်မှုပုံစံတွေပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်စရာတွေအမျိုးမျိုးရှိတာမလို့ အခုပဲ +95 (0) 99566 59875 သို့မဟုတ် phgc@yomaland.com သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းလိုက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်လည်း အထူးစျေးနှုန်းတွေရှိပါတယ်။
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာရှိခရစ်စမတ်ပွဲတော် : မျှဝေ၊ ယှဥ်တွဲနေထိုင်၊ ပေးကမ်းခြင်းများနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အချိန်ကာလ
ခရစ်စမတ်ကာလ ဆိုတာ ပြန်လည်ရယူဖို့ကို မမျှော်လင့်ပဲ ပေးကမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အချိန်လေးပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ သူတို့ပျော်ရွှင်သွားတာကို ကြည့်ပြီး ပေးလိုက်တဲ့သူဆီမှာပါ အပျော်တွေကူးစက်စေပါတယ်။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွေ၊ ကန့်သတ်ချက်တွေကို တခဏတာမေ့ပြီး လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာ ခရစ်စမတ်ကာလကို ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာတွင်းမှာ နေထိုင်သူတွေနဲ့အတူတူ မျှဝေ၊ ယှဥ်တွဲနေထိုင်၊ ပေးကမ်းမှုတွေပြုလုပ်နိုင်မယ့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အစီအစဥ်လေးတွေကို ဖန်တီးထားပါတယ်။
ဆန်တာဆီသို့ : ဆန်တာဆီသို့ စာပေးပို့ခြင်းကိုClub Lounge မှာပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ (ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ မှ ၂၀ ရက်နေ့ အထိ)
Tigers, Cobras နှင့် Pythons လေးတို့ရေ၊ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ လိမ်လိမ်မာမာနဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ခုလိုအချိန်က ဆန်တာဆီကိုစာပေးပို့ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲနော်။
မိဘမဲ့ကျောင်းများမှ ကလေးများအတွက် ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်
ခရစ်စမတ်ကာလမှာ ချစ်ခင်ရတဲ့ သားသားမီးမီးတို့အတွက် လက်ဆောင်တွေဝယ်တဲ့အခါ အပိုတစ်ခုဝယ်ရင်း မိဘမဲ့ဂေဟာသို့ လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်လိုက်ပါ။ ဝယ်ယူလာတဲ့ လက်ဆောင်အပိုလေးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားက မိဘမဲ့ကျောင်းများသို့ ပေးပို့လှူဒါန်းသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလာတဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေကို ပါကင်လှလှလေးထုပ်တဲ့အခါမှာ မိန်းကလေး၊ယောကျာ်းလေး၊မည်သည့်အသက်အရွယ်အတွက် ရည်ရွယ်တာလဲဆိုတာလေးတွေကိုပါ ရေးပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။ ဒီလိုမျိုးလေးရေးပေးခြင်းအားဖြင့် လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ မည်သူကိုပေးရမလဲဆိုတာကို သိစေနိုင်တဲ့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ လက်ဆောင်လေးတွေပေးဖို့ ထုပ်ပိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Club Lounge မှာရှိတဲ့ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်
အောက်မှာ လက်ဆောင်လေးတွေ လာထားလိုက်နော်။ လက်ဆောင်လေးတွေရယ်၊ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကြီးရယ်နဲ့အတူတူ ဓာတ်ပုံရိုက် #punhlaingsharing ကို အသုံးပြုပြီး ပေးပို့ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုပါတယ်။ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ပရင့်ထုတ်ပြီး လက်ဆောင်လက်ခံရရှိတဲ့ကလေးတွေကို ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ငွေသားလှူဒါန်းခြင်းများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်)
ခရစ်စမတ်စိတ်ဝိညာဉ်လေးတွေနိုးကြားလာဖို့ Country Club ရဲ့မီးထွန်းပွဲ အစီအစဥ်လေးမှာ ပါဝင်လိုက်ပါ (ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့၊ ညနေ ၅ နာရီ)
ခရစ်စမတ်သစ်ပင်မီးထွန်းပွဲလေးမှာ ပါဝင်ဖို့အတွက် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ဆန်တာက ညနေခင်းစောစောမှာ ရောက်ရှိလာမှာနော်။ ခရစ်စမတ် ရိုးရာအချိုမုန့်အမျိုးစုံနဲ့တည်ခင်းဧည့်ခံပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ခုတည်းက အဆင်သင့်ပြင်ထားလိုက်တော့နော်။
ရှားလော့ဟုမ်းနဲ့အတူတူ ပန်းလှိုင်စွန့်စားခန်းများ (ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ရက်နေ့၊ ညနေ ၄နာရီ)
သဲလွန်စတွေကို မကြာမီအချိန်အတောအတွင်းပေးပို့သွားတော့မှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်နေတော့နော်။
မိသားစုလိုက်ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်လေးတွေကို Club Lounge မှာ ကြည့်ကြမယ် Cancelled (ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့၊ ညနေ ၆:၃၀)
မိသားစုလိုက်အတူတူ Club Lounge က ခုံလေးတွေပေါ်မှာ နွေးနွေးထွေးထွေး ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အချိန်ကုန်ဆုံးရတာက ပျော်ရွှင်စရာတစ်မျိုးပဲနော်။ နေရာလွတ်လေးတွေကျန်နေတုန်း အန်တီအိကေကို ဖုန်းနံပတ် +95 (0) 95370790 သို့မဟုတ် eikaykhine@yomaland.com ဆက်သွယ်ပြီး စာရင်းပေးထားလိုက်တော့နော်။
ခရစ်စမတ်စျေး (ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ နံနက်၉နာရီ မှ ညနေ ၄နာရီအထိ)
အမျိုးမျိုးသောအစားအသောက်တွေကို သယ်ဆောင်လာမယ့် ကုန်တင်ကားတွေ၊ အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူတွေ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်မှုပစ္စည်းလေးတွေ၊ ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေကို Fun Field မှာ ရောင်းချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကို ရောင်းချလိုသူတွေအနေနဲ့ မဟန်နီဆီကို ဖုန်းနံပတ် +95 (0) 9777216999 သို့မဟုတ် honeyoo@yomaland.com ဆက်သွယ်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။
ခရစ်စမတ်တာတိုအပြေးပွဲ (ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့၊ ညနေ ၃:၃၀)
၂၀၂၀ တာတိုပြေးပွဲကတော့ အပြေးသမားတွေ၊ လမ်းလျှောက်သူတွေ၊ မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို ပါဝင်နိုင်တဲ့ အပျော်အပြေးပြိုင်ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြေးပြိုင်ပွဲအတွက် ဘောလုံးကွင်းမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် ညနေ ၃:၃၀ မှာ ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ ပါဝင်လိုပါက အန်တီ Alice ဆီကို ဖုန်းနံပတ် +95 (0) 9250678382 သို့မဟုတ် ayethandartun@yomaland.com သို့ဆက်သွယ်ပြီး စာရင်းပေးနိုင်ပါပြီ။
Oscar စားသောက်ဆိုင်တွင် Christmas Eve ညစာစားပွဲ (ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့)
ရေကူးကန်ဘေးက ခရစ်စမတ်နေ့ Roast & BBQ Brunch (ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့)
ကိုအောင်ဦးဦးကို ဖုန်းနံပတ် +95 (0) 9799870277 သို့မဟုတ် aungaungoo@memoriesgroup.com သို့ဆက်သွယ်ပြီး အခုပဲ ဘိုကင်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူအခန်းကဏ္ဍ : MICHELLE DEAN
Michelle Dean က Non-Profit Social Enterprise တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Yangon Bakehouse ကို ဘာကြောင့်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြပေးထားပါတယ်။ အပြည့်အစုံဖတ်ရှုလိုပါက Read More.
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာရှိ COUNTRY CLUB တွင်အဖွဲ့ဝင်ခြင်း
CLUB LOUNGE ရှိ THE THIRD SPACE
ချစ်ခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေများနှင့် တွေ့ဆုံရာ၊ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရာ၊ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြီး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ အပန်းဖြေအနားယူနိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခု။ သီးသန့်အစည်းအဝေးပွဲများ၊ ကုန်ပစ္စည်းကြော်ညာပွဲ အခမ်းအနားများ၊ ကော့တေးပါတီပွဲအခမ်းအနားများ ပြုလုပ်လိုပါက extension 1406 သို့မဟုတ် +95 (0) 1-368 7778 သို့ဆက်သွယ်ပြီးဘိုကင်ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
The Hills @ Pun Hlaing ဟာ သင့်မိသားစုအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်ပါတယ်။အရေအတွက် အနည်းငယ်သာ ဆောက်လုပ်မယ့် The Hills @ Pun Hlaing က အသက်အရွယ်မျိုးစုံနဲ့ ကိုက်ညီအဆင်ပြေပြီး မိသားစုအတွက် သာယာတဲ့ ရိပ်မွန်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
စုံစမ်းရန်: Soe Yan Paing. +95 (0) 94 2171 7676 သို့မဟုတ် soeyanpaing@yomaland.com
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို ညွှန်းဆိုပေးခြင်းဖြင့် ခံစားခွင့်ရရှိနိုင်မယ့် အစီအစဥ်
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာမှာနေထိုင်ဖို့ ညွှန်းပေးရုံနဲ့ $200 ခံစားခွင့်ကို ရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ $200 ကို punhlaingrentals@yomaland.com သို့ဆက်သွယ်ပြီး ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာရှိ Country Store တွင်စျေးဝယ်ယူလိုက်ပါ။
အိမ်ရာဝင်းအတွင်းက Country Store မှာ အရည်အသွေးပြည့်မှီပြီး အမျိုးအစား စုံလင်တဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေ၊ အစားအသောက်တွေကို အချိန်မကုန် လူမပင်ပန်းပဲ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဆက်သွယ်ရန် - Ext 1502 သို့မဟုတ် +95 (0) 9760112102. တည်နေရာ Google Map
Memories Group Dream Vacation ဗလာမပါကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲ အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်!
လက်မှတ်တစ်စောင်ကို USD ၂၀ သို့မဟုတ် ၂၆,၀ဝ၀ ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူပြီး ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက် အိပ်မက်ခရီးတွေဆီအရောက်လှမ်းနိုင်မယ့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်!!! အရမ်းစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပြီဆိုလား?
Dream Vacation ဗလာမပါကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲအကြောင်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ပွဲ၏ စုစုပေါင်း USD ၁၈၁,၀၀၀* တန်ဖိုးရှိကံစမ်းမဲများကိုမဲဖောက်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်လက်မှတ်ဝယ်ယူသူတိုင်းကတော့ ကံထူးရှင်တွေပါပဲ... ဒီ့အတွက် ဆက်လက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်!
အထူးဆုက လူ ၂ဦး အတွက် USD ၆၀ဝ၀* တန်ဖိုးရှိ Awei Pila Beachfront Villa မှာ ၅ရက် ၄ည တည်းခိုခွင့်အပြင် အသွားအပြန်ပြည်တွင်းလေယာဉ်လက်မှတ်၂စောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးဆုအပြင် ဆု ၁၀၀ တွင် လူ ၂ ဦးအတွက် USD ၇၀ဝ* တန်ဖိုးရှိ Balloons Over Bagan လူစီးမီးပုံပျံ စီးနင်းခွင့် နှင့် ကျန်ရှိသော ဆု ၁၀၀ တွင် လူ ၂ဦးအတွက် Awei Metta ၏ USD ၁၂၀* တန်ဖိုးရှိ Deluxe Room တွင် ၁ည တည်းခိုခွင့်တို့ဖြစ်ပါတယ်... ပါဝင်တဲ့ဆုတွေက ၂၀၁ ဆုတောင်ပါတာမို့ ကံထူးရှင်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်နော်! လက်မှတ်ဝယ်ယူမှုတိုင်းအတွက် တစ်ဦးချင်းစီတို့တွင် ကံထူးရှင်ဖြစ်နိုင်မှုအခွင့်အရေးရှိပြီး ဆုမရရှိခဲ့ပါက ဝယ်ယူထားသည့် လက်မှတ်အရေအတွက်၏ စုစုပေါင်းထပ်တူထပ်မျှတန်ဖိုးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း Memories Group ၏ F&B (သို့) ဟိုတယ်အခန်းတည်းခိုမှုတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောဘောက်ချာများကို ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dream Vacation ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြပါလင့်ခ် https://memoriesgroup.com/dreamvacation တွင်လေ့လာပြီး လက်မှတ်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ! ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကို ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ ၃ရက်နေ့မှာ Live ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးအတွက် ၂၀၂၁ Myanmar Memories များတွေ့ ကြုံခံစားနိုင်ဖို့ Memories Group ကစောင့်ကြိုနေပါပြီ!